तपाइँ क्यामिनो डे स्यान्टियागो गर्न जान्नुपर्दछ यात्रा समाचार
तपाइँ क्यामिनो डे स्यान्टियागो गर्न जान्नुपर्दछ
मरियम | | स्यान्टियागो डे कम्ोस्टेला
अनादि कालदेखि, धेरै ठाउँहरूमा पवित्र स्थानहरूमा यात्रा गर्नु सामान्य भइसकेको छ। यी कार्यक्रमहरूको आध्यात्मिक भावना र ईश्वरीय दृष्टिकोण थियो। इसाईमतको मामलामा, तीर्थयात्रा केन्द्रहरू रोम (इटाली), जेरूसलम (इजरायल) र स्यान्टियागो डे कम्पोस्टिला (स्पेन) हुन्।
कि त एक वचन को कारण, विश्वास को कारण वा एक चुनौती को कारण अकेला वा कम्पनी मा, हरेक वर्ष को पार गर्न को लागी हजारौं व्यक्तिले सैन्टियागो डे कम्पोस्टेला सम्म पैदल यात्रा गरे, स्थान जहाँ प्रेरित स्यान्टियागो पुरिएको छ। तर स्पेनको इतिहासमा यो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व को थियो र क्यामिनो डे स्यान्टियागोको उत्पत्ति के थियो?
1 प्रेरित याकूब को थिए?
2 Camino de Santiago को मार्गहरू
3 क्यामिनो डि स्यान्टियागो गर्नका लागि सुझावहरू
4 कम्पोस्टेलाको सान्टिआगोको क्याथेड्रल
प्रेरित याकूब को थिए?
मौखिक परम्परा अनुसार, जेम्स (ख्रीष्टका प्रेरितहरू मध्ये एक) उनी यस इलाकामा प्रचार गर्न रोमन बेटिकामा आए। इबेरियन प्रायद्वीपको लामो यात्रा पछि, उहाँ यरूशलेम फर्कनुभयो र 44 XNUMX मा तरवारले उनको शिर काटियो। उनका चेलाहरूले उनको शरीर जम्मा गरे र त्यसलाई रोमी हिस्पानियाको दिशामा पठाए। जहाज ग्यालिसियन समुद्री तटमा पुगे र शव स्थानमा सारियो जहाँ आज कम्पोस्टेला गिर्जाघर दफन गरिएको छ।
१ 1630० मा, पोप अर्बन आठौंले आधिकारिक रूपमा आदेश दिए प्रेरित सान्तियागो एल मेयर स्पेनिश देशको एकमात्र संरक्षक मानिन्छ। स्पेनिश लेखक फ्रान्सिस्को डे क्वेदोडोले यति धेरै जोड दिए कि "परमेश्वरले स्पेनको संरक्षक सन्तियागो बनाउनुभयो जुन त्यतिबेला थिएनन्, ताकि जब त्यो दिन आयो उसले उनीको निम्ति मध्यस्थता गर्न सक्थ्यो र उनको सिद्धान्तले उनलाई फेरि जिउँदो बनाउन सक्छ।" "आफ्नो तरवार संग।
यो थियो नवौं शताब्दीमा जब सन्तियागो अपोस्टोलको चिहानको खोजी पश्चिममा रिपोर्ट गरिएको थियो स्यान्टियागो डे कम्पोस्टेलामा। त्यसबेलादेखि, तीर्थयात्रीहरूको बहाव कहिल्यै रोकेन, जेकबियन मार्गले अधिक र कम वैभवको अवधिहरू अनुभव गरेको छ।
शताब्दियौंदेखि धेरै मठहरू र चर्चहरू यस मार्गमा निर्माण गरियो र युरोपको सबै कुनाका मानिसहरू पवित्र प्रेरितको चिहान हेर्न स्यान्टियागो डे कम्पोस्टिला आए। १ th औं शताब्दीमा (जब प्रोटेस्टेन्ट सुधार र धर्मको युद्धले तीर्थयात्रीहरूको संख्या घटेको थियो) क्यामिनो डि स्यान्टियागोको आकास दिन जारी रह्यो र १ th औं शताब्दीमा चट्टानमा हिर्कायो। यद्यपि २० औं शताब्दीको अन्तमा यसले रिकभरीको एक निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्‍यो विभिन्न संस्थाहरूको आवेगका कारण नागरिक र धार्मिक। यसैले, धेरै मार्गहरू सिर्जना गरियो जुन स्पेनभरिबाट गालिसियामा परिणत भयो।
Camino de Santiago को मार्गहरू
त्यहाँ धेरै मार्गहरू छन् क्यामिनो डे स्यान्टियागो गर्नका लागि। सबैभन्दा महत्त्वपूर्णहरू हुन्: फ्रेन्च, अर्गोन्जियन, पोर्तुगाली, उत्तरी, आदिम, अंग्रेजी, साल्भाडोर, बास्क, बोयाना, बाज्टन, म्याड्रिड, कातालान, एब्रो, लेभन्टे, दक्षिणपूर्व, ऊन, चाँदी, सनाब्रीस, काडिज, मोजाराबिक र फिस्टर्रा।
यो निर्णय भएको छ कि एक पल्ट सेन्टियागो डे कम्पोस्टेला को लागी लामो यात्रा यो तपाइँको आफ्नै वा संगठित तरीकाले क्यामिनो डे स्यान्टियागो गर्ने बीच छनौट गर्न बाँकी छ एक पर्यटन एजेन्सी संग। दुबै तरीकाहरूका उनीहरूका फाइदाहरू र बेफाइदाहरू छन्, तर यात्राको अपेक्षाहरू र प्रेरणाहरूमा निर्भरता यस गालिसियन शहरको यात्रा गर्ने एक वा अर्को तरिका अझ चाखलाग्दो हुनेछ।
क्यामिनो डि स्यान्टियागो गर्नका लागि सुझावहरू
सबै भन्दा सल्लाहकार लामो हिड्ने को लामो दिन बाँच्न छ यात्राको लागि अग्रणी हप्ताहरू प्रशिक्षण (यदि सम्भव भए तपाईंको पछाडि ब्याकप्याकको साथ) शारीरिक शक्ति र प्रतिरोध प्राप्त गर्न। यद्यपि यो लामो र लामो हुनुपर्दछ, प्रयास पनि प्रत्येक तीर्थयात्रीको शारीरिक अवस्थाको आधारमा गर्नु पर्ने हुन्छ। यो यात्रा सुरु गर्नु अघि आफैलाई चोट पुर्‍याउने सल्लाह छैन।
क्यामिनो डे स्यान्टियागो यात्रा गर्न ब्याकप्याक बनाउँदा हामीले यो ध्यानमा राख्नु पर्छ कि यो १० किलोभन्दा बढी हुनुहुन्न। सबैभन्दा उत्तम चीजलाई तल राख्नु उत्तम हुन्छ र जतिसक्दो चाँडो फिर्ता पछाडि बढी आराम गर्न सार्न। यो एक स्लीपिंग ब्याग, कपडा, आरामदायक जुत्ता, टोपी, एक सानो प्राथमिक उपचार किट र केही खाना र पेय संग यात्रा गर्न आवश्यक हुनेछ। हामी मोबाइल फोन, फ्ल्यासलाइट, नक्शा, स्टाफ र स्केलप ल्याउन बिर्सन सक्दैनौं जसले हामीलाई तीर्थयात्रीहरूको रूपमा चिनाउँछ।
साइकलबाट क्यामिनो डि स्यान्टियागो यात्राको मामलामा, सन्तुलित तौल बोक्न आवश्यक हुनेछ ताकि पेडलिaling सकेसम्म सहज नै छ। पछाडि केहि सेडलब्यागहरू वा र्याक ल्याउनुहोस्, सिट बार र भण्डार उपकरणको मुनि राख्न त्रिकोणको काँध प्याड र ह्यान्डलबारमा भण्डार गर्न एक झोला र त्यहाँ कागजात वा सडकको मार्गहरू।
धेरै पैसा बोक्नु राम्रो हुँदैन र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ। जरुरी मामिलाहरूमा हामीले एउटा परिवारको सदस्य वा साथीलाई हामीले मार्ग बारे जानकारी दिनुपर्दछ जुन हामीले लिइरहेका छौं र सूचना कार्यालयहरूको टेलिफोन नम्बर के हुन सक्छ भनेर नोट गरिएको हुनुपर्दछ।
थप रूपमा, यात्रा सुरु गर्नु अघि यो चरणहरूको योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ जुन गरिन्छ। धेरै अनुभवी तीर्थयात्रीहरूले दिनको २ 25 वा kilometers० किलोमिटर गर्न सल्लाह दिन्छन् र प्रत्येक सात दिनमा एक दिन आराम गर्नुहोस्।
Camino de Santiago को बखत
निश्चित रूपले तपाईंहरू धेरैलाई अचम्म लाग्नेछ कि केमिनो डे स्यान्टियागो गर्नका लागि उत्तम समय के हो। Pilgrims ०% तीर्थयात्रीहरूले मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म यात्रा गर्न रोज्दछन् किनभने जाडोमा स्पेनको उत्तरी भागमा वर्षा अत्यन्तै तीव्र हुन्छ र ग्रीष्म theतुमा मुलुकभरि तातो दम छ।
यात्राको अन्तमा तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ "ला कम्पोस्टेला", चर्च द्वारा जारी गरिएको प्रमाणपत्र र क्यामिनो डि स्यान्टियागो पूरा भइसक्यो भन्ने प्रमाणित गर्दै। यसलाई प्राप्त गर्न, यो "तीर्थयात्रीको मान्यता" बोक्न आवश्यक हुन्छ जुन आश्रय, चर्च, बार वा बाटोमा दिनको दुई पटक मुहर लगाउनु पर्छ।
यो मान्यता कुनै स्पेनी शहर, टाउन हल वा क्यामिनो डे स्यान्टियागोको अंश भएका शहरहरू र शहरहरूको पुलिस स्टेशनहरूको चर्चका अधिकारीहरूद्वारा प्रदान गरिएको हो।
"La Compostela" प्राप्त गर्न तपाईंले प्रमाणित गर्नै पर्छ तपाईंले अन्तिम १०० किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नुभयो वा साइकलबाट २०० किमि। यो तीर्थयात्राको कार्यालयमा स .्कलन गरिएको छ प्लाजा डे प्रेटेरियासको छेउमा, क्याथेड्रलबाट केही मीटरहरू।
स्यान्टियागो डे कम्पोस्टेलाको क्याथेड्रल स्पेनमा रोमानेस्क कलाको सबैभन्दा उल्लेखनीय कार्य हो। शताब्दीयौंदेखि ती धार्मिक यात्रीहरूले क्रिश्चियन देशबाट सान्टियागो अपोस्टोलको चिहानसम्म पु has्याइरहेका यो क्यामिनो डि स्यान्टियागोको अन्तिम लक्ष्य पनि हो। यदि यो पर्याप्त भएन भने, यो क्याथेड्रल सन्तियागो डे कम्पोस्टिलाको निर्माणको उद्घाटन ढु was्गा हो जुन पवित्र शहर र विश्व सम्पदाको रूपमा जन्म भएको थियो।
क्याथेड्रलको सब भन्दा टाढाको पुरानो शताब्दी १ शताब्दीको एउटा सानो रोमन मजार थियो प्यालेस्टाइनमा उसको टाउको काट्ने बित्तिकै (प्रेरित of 44) प्रेरित जेम्सका अवशेषहरू गाडे। स्यान्टियागो डे कम्पोस्टेलाको महान् क्याथेड्रलको निर्माण वर्ष १० around around तिर शुरू भएको हुनुपर्छ, बिशप डिएगो पेलेज द्वारा प्रचारित र मास्ट्रो एस्टेबानद्वारा निर्देशित।
तपाईं त्यो भन्न सक्नुहुन्छ अधिकांश क्याथेड्रल ११२२ तिर बनेको थियो। १o औं शताब्दीको बारोक एयरले बाहिरी रूपमा रोमनस्क मूलतालाई विकृत बनायो। अजाबाचेरियाको फडेड प्रतिस्थापन गरियो र महान पश्चिमी फाउड ओब्राडोइरोको साथ ढाकिएको थियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » स्यान्टियागो डे कम्ोस्टेला » तपाइँ क्यामिनो डे स्यान्टियागो गर्न जान्नुपर्दछ
कोस्टा रिका, एक प्राकृतिक स्वर्ग खोज गर्न
चेर्नोबिल, एक दिन आणविक शक्ति केन्द्र (भाग I) मा - तयारीहरू